Apple wuxuu bilaabay u dhaqaaq barnaamijka iOS u dhaqaaq Google Play | Wararka IPhone
Apple waxay bilaabeysaa u dhaqaaq macruufka dadka isticmaala si ay uga wareegaan Android ilaa iPhone
Sidii lagu balamay, Apple ayaa sii deysay barnaamijka shalay U dhaqaaq macruufka dukaanka barnaamijka Android, Google Play. Codsigan, shirkadda ku saleysan Cupertino waxay ujeedadeedu tahay inay ku dhiirrigeliso dadka isticmaala aaladda Android inay u beddelaan nidaamka qalliinka moobiilka qaniinyada. U dhaqaaq xagga macruufka, isticmaale kasta oo wata taleefan casri ah ama kiniin leh Android 4.0 ama wixii ka dambeeya waad wareejin kartaa xiriirada, taariikhda farriinta, sawirada iyo fiidiyowyada, calaamadaha bogga, cinwaanada emaylka, iyo jadwalka taariikhda.
Sharaxaada, Apple waxay ku dartay qoraal tilmaamaya wax dad badan oo isticmaala macruufka ayaa ka fikiraya, hubinta in «wax kasta oo ku jira macruufka waxaa loogu talagalay inay noqdaan wax fudud. Taas waxaa ka mid ah in isaga loo sii gudbo. In dhowr tallaabo ah, waxaad si ammaan ah oo si toos ah uga guuri kartaa waxyaabaha aad ka qalab Android aad la Move in macruufka app. Looma baahna inaad keydiso alaabadaada meelkasta oo kale kahor intaadan ka wareegin Android«. Laakiin isticmaaleyaasha Google Play ma u malayn doonaan isku mid?
Qiimaynta ayaa sheegaysa dhamaanteed. 2.736 cod hal-xiddigle ah, maxaadse u diidi kartaa diidmo. Intaas waxaa sii dheer, codadkaasi waxay ka yimaadeen isticmaaleyaasha aan xitaa tixgelin siin isbedelka, sidaas darteed Waxay wax u qoraan uun si ay ula qasaan Apple iyo isticmaalayaasha adeegsada aaladooda. Waxaad kaliya ubaahantahay inaad aqriso faallada oraneysa adoo adeegsanaya arjiga wuxuu noqday «qabow badan iyo haweeneyda ayaa si adag iigu ceyrsanaya«, Sidii haddii taasi ay ahayd sababta ay dadka isticmaala macruufka ugu isticmaalaan taleefanka gacanta dhismaha.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan faallo ka bixiyo inay tahay wax lagu qoslo in dadka Apple isticmaala ay noogu yeeraan "fanboys" markii 2.736 isticmaale oo ka mid ah 3.517 ay xiddig u codeeyeen codsi WAAN SHUBAY inay isku dayeen. Iga raali noqo, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo fanboy adduunkeyga halkii aan ka ahaan lahaa a neceb, taas oo ah nooc kale oo fanboy ah, inkasta oo aysan iyagu rabin inay qirtaan.
Sikastaba, waxaan kudhameystirayaa inaan kahadlo arjiga laftiisa asaga oo sheegaya waqtiga hijrada xogta, iPhone wuxuu abuuri doonaa shabakad WiFi gaar ah iyo raadin doonaa qalab kasta oo android ah u dhaqaaq U dhaqaaq macruufka. Markaad gasho lambarka amniga, waxay bilaabi doontaa inay wareejiso xogta oo ay dhammaanteed ku dhigto bartaada, ama sidaas Apple ayaa ballanqaadaysa.
Ku soo degso u dhaqaaq macruufka Google Play
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Apple waxay bilaabeysaa u dhaqaaq macruufka dadka isticmaala si ay uga wareegaan Android ilaa iPhone
Waan fahamsanahay iyaga ... markii aan maro wadada weyn sidoo kale waxaan dhalaa kuwa igu soo raaca Mercedes, Audi ama Ferrari, laakiin sameeya jimicsi is-dhaleeceyn waan ogahay sababta ay u tahay ... maxaa yeelay isku waxbaa ku dhaca dadkan ....
Runtii miyaad u maleyneysaa sababta oo ah waxaan heysanaa iPhone waxaan u qalanaa xaasidnimo?
Ma ogtahay in dhamaadka-sare ee tartanka Apple (haddii tartanka Apple, aanad adigu lahayn) inay u qalmaan sidaan oo kale?
Waan qoslaayaa iyadoo faallooyinka qaar lasiinayo, badankooduna waxay noqon doonaan wax lagu kala googooyo way .. Sikastaba waxaan u arkaa inay qalad tahay, runti ma dhalinayaan waxqabadka barnaamijka, wax kasta oo ka caawinaya fududeynta nolosha isticmaalaha waa la soo dhaweynayaa.
Waad ku mahadsan tahay Pablo warkan
Fuck, taasi horay ayey u fiicnayd. Ma haysataa waddo kale oo aad is barbar dhigto oo aan ahayn tusaalaha nacaladda ee baabuurta? Kaalay, hore uma aadan arag taas. Si kastaba ha noqotee, haddii iPhone uu yahay Mercedes, Nexus ama ku dhowaad wixii sare ee sare ee Android ah, waa BMW.
Waxaan isku dayayaa inaan u adeegsado arjigaas inaan wax uga wareejiyo mobilada una wareejiyo iPad-ka laakiin ma arko koodhka ay tahay inuu ka muuqdo kiniinka.
Waa isla sheekadii hore. Taageerayaasha Android oo dhaleeceynaya Apple iyo Apple Apple oo dhaleeceynaya Android. Mid kasta oo adeegsada waxa ku habboon isaga.
Anigu waxaan ahay isticmaale labada nidaam (nexus 7 2013 iyo iPhone 5), waana hubaa inaan door bido iOs, maadaama ay ka fududdahay oo ay fududahay in la isticmaalo, waxaanan ka helay barnaamijyada ugu wax soo saarka iyo xirfada badan iOs
Fikradayda shakhsiga ah, waxaan kaga duwanahay celcelis ahaan isticmaalaha doonaya inuu wax ka beddelo wax walba oo telefonkiisa gacanta ah, waxaan doorbidaa wax fudud, iftiin iyo caddaalad. Waa waxa aaladda iOs ay i siiso.
Haddii macruufka 'iOS' uu yahay mid fudud oo si fudud loo isticmaali karo waana sababta aad u doorbideyso, waxaad leedahay Android waa mid adag oo ay adag tahay in la isticmaalo. Gee, Spain waa inay ka buuxaan hibada markay 89% isticmaalaan Android. Anigana ha i siin qiimaha, kuwa dhammaadka-sarreeya ayaa jira oo 3/4 isku mid ah ayaa ka dhaca Yurub.
Pablo, waxay umuuqataa inaadan sidoo kale waxbadan iskudayin, maxaa yeelay maqaalka intiisa badan waxaad kubixisay kahadalka waxa taageerayaasha android dhahaan. Aad u culus.
Sababaha AAN loo badalin iPhone 6 ee iPhone 6s